Oromoo Rasassan Ukamsuun hin danda’amuu !!! Ibsa GPO
Hidhaa fi ajjeechaan yoomilee gaaffii mirga hiree ofiin murteeffannaa Saba Oromoo booddeetti hindeebisu. Qabsoo biliisummaa Oromoo dachaan finiinsa malee abdii kutannaa fi harka maratee akka falmaa biliisummaa irraa duubatti jedhu yoomillee kan ta'u miti. Uummata nagaa baatii tokko guutuu rabbi isa uumeef garaa isaa Maratee marrummaan gogaan wayita tsoomaa jiru kanatti sirni faashistii kun waraana mana sagadaa masjiida isaanitti ergee muslima nagaa ofiifuu nyaatee hindhugnee mankaraarsitoota jechuun mana sagadaa keessatti rasaasa itti roobsanii jilmaan nama fixuun wayyaanee kun Oromoo qabsoo biliisummaa irraa abdii kutachiisuu otoo hintaane Umurii bittaa isaaf kan abdii kutatee ta'uu namatti mullisa.
Wayyanen Wagga kana maqa Musilman Oromoo fixaa jirti. Oromiya kessaati bakka Magala Kofale, Arsi Zoni irrat 25 ajeefame. Gadab Asasa, 6 ajeefame, Garba (Kamise) 7 ajeefame. Garuu Nannoolee Afar, Amhara, Tigray, Somali, Benishangul nami tokkole hin dunee. Maqa sochii Musilman kan irrati dulama jiru Oromoo irrati. Guyyaa Arraa Augast 3 Mootummaan wayyaanee magaalaa kofaleetti muslimoota 6 ol ajjeesuuun isaa dhagayame. Magaalaa Kofalee bakka waabee gafarsaa jedhamutti waraanni mootummaa Sheekha biyyaa badii malee qabee hidhuuf yaalii godhee. Xalayaan mana murtii mee jechuun waan gaafataniif Waraanni wayyaanee qawwee itti roobsee namoota heeddu ajjeesee, hedduu madeeysuun isaa dhagayamee. Mootummaan karoora Isaa kan biyya shororkeysuuf baafate galmaan gahuuf Muslimoota nagayaa badii malee ajjeesee Shororkeesitoota jechuun akka moggaasaa akka jiru beekkamdha. Akkasumas guyyaa arraa Goodinni Arsii lixaa dirree waraana fakkaatee oluun Isaa dhagayameera. Magaalaa Dodoolaa, Asaasaa fii Shaashamannee waraanni moootummaa Muslimoota heddu akka hidhaa jiran dhagayame. Musilima Oromoo 1500 ol mana hidha keessati dararama jiru.
Guyya Musilimi Soma hiku guyaa Eid Kana Musilimi Oromo bakka itti Bayyatu Aanaa Jarsoo Lixa wallaga keessa Dhigga dhangalasani maliif?.Tarkaanfii Ajjeechaa Wayyaaneen/TPLF/ ilmaan Oromoo irratti gara jabinaan fudhachaa jirtu haala nama gaddisiisuun Cimee itti fufee jira. Godina Wallaggaa Lixaa Aanaa Jaarsoo Magaalaa Jaarsoo keessatti Poolisoonni wayyaanee baayinaan Afur/4/ ta'aan dargaggoo maqaan isaa IFAA AGGASUU SHIILASHII jedhamu guyyaa har'aa ati miseensa ABO ti kana dura sibarbaadaa turre dhaabbadhuu jechuun poolisoota arfan keessaa tokko Poolisii maqaan isaa Mitikkuu Tarfaasaa Daannoo kan jedhamu saalfii tokko malee dargaggoo Ifaa Aggasuu Shiilashiitti rasaasa itti roobsee magaalaa Jaarsoo Ganda 02 keessatti daandii konkoolaataa gubbaatti ajjeeseera.
Gooftaan isaanii Mallasaan Zeenaawwii bara 2004 oggaa lubbuun jiru dhukkubsachuu isaan yeroo xiqqoo fuuldura Paarlaamaa isaaf haasawaa godhee akkas jedhe.("Caasaan Alqaa'idaa ykn shororkeessaa biyya keenya seenee Oromiyaa Godinaalee Arsiifi Baaleetti akka argamee qorannoodhaan mirkaneessineerra jedhe"). Kana jechuun isaa Maqaa shorokeessaatti gargaaramee sodaa Oromoo irraa qabu ibsachuufi sodaa kanaan sababa Uumee Oromoo duguugee lafarraa fixuuf tarsimoofi imaammata gooftaan wayyaanee Mallasaan baasee du'ee jaleefi ashkaroonni isaa hojeetti kan hiikan dhumaatii Arsii dhihaatti ta'eef sababa kanaafiidha. musilimummaatu rakkoo qaba yoota'eef sabni Sumaalee Ogaadeen harka dhibba keessaa dhibba Oromoo caalaa musliima. Affaariin dhibbeentaa guutuun musilima. Sumaalee meeqatu ajjeefamee? Affaari meeqatu ajjeefame? Saba Amaaraa keessa musilimni hedduudha. Amaara meeqatu ajjeefame? Tigireenis misilima qabdi. Tigiree Meeqatu ajjeefame? Uummati kibbaa dachaadhaan misilima. Uummata kibbaa meeqatu ajjeefame? Yaa ilmaan Oromoo ajjeechaan nurratti baname maqaa Amantiin golgaa godhatanii shororkeessummaan Sanyii Oromoo fixuuf tarsimoo karoora TPLF baafattee Oromoo irratti duulaa jirtu waanta'eef sababa amantii fi Shororkeessaa jette Wayyaaneefi addatti immoo jaleenifi ergamtuun isaanii OPDOn isin sobduu iddoo kunnuu dhiistanii duula sanyii Oromoo lafarraa fixanii biyya abbaa keenyaa Oromiyaa nurraa fudhachuuf deeman kana hubattanii maqaa Oromummaafi qabsoo biliisummaa Oromoo jettu qofaan akka walcina hiriirtanii wayyaanee sirna nama nyaatu kana ofirraa buqqistanii gumaa dhiiga qulqulluu lammii keessanii akka waliin baafannu yeroon isaa amma ta'uu qaba jeena!!!
Oromoon nibiliisoma Oromiyaan niwalaboomti!